Live လွှင့် ပွဲကြမ်းလိုက်တဲ့ ယုန်လေး – Na Pann San
Na Pann San W | August 7, 2020 | Celebrity | No Comments
အားလုံး အတွက် ကျွန်တော် မှ တာဝန် ရှိပါတယ် .ဒီတစ်ခါ ပြီးရင်တော့ ဘာမှ ထပ်မရှင်းတော့ ပါ
အစ်ကို့ ကို တောက်လျောက် အစ်ကို အရင်းလို ဆက်ဆံတယ် .အကုန်လုံး သိချင်တာတွေ ပြောပြတယ်. ကျွန်တော့် ဦးနောက် ချက်ချင်း တစ်ရက်နီးပါး အလုပ်မလုပ်ေ တာ့ဘူးတို င်ပင်တယ် .တောင်းပန်သင့် တယ်ပြောတယ် . တောင်းပန်တယ် . ဖြုတ်ချသင့်တယ် ပြောတယ် ဖြုတ်ချတယ် .ကျွန်တော် တိုက်ေ ပ်ါက ခုန်ချင်တာတို့ .ရှေ့ကဓား နဲ့ ကိုယ့်ဗိုက်ကို ထိုးချင်တဲ့ အထိဖြစ်တယ် .သေချင်တဲ့ စိတ်တွေ အထိ ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရင်းနီး ဖူးတဲ့ တော်တော်များများ မထည့်တွက်ပေးကျဖူး .
တောက်လျောက် Pressure ပေး ပြီး Status တွေတင်တယ် .လေးစားလို့ အစ်ကို Status တွေအထင်အမြင် တစ်ဇောင်းတွေကြီးပဲတင်လာတယ် .ကျွန်တော် တောင်းပန်တယ် .ဖြုတ်ချတယ် .အခုလည်း တစ်နှစ်ပိတ် အပြစ်ပေးတယ် .အစ်ကို မပြီးသေးဘူး .ဘယ်လောက်အထိ စွတ်စွဲ မကောင်းမြင်ဦးမှာလဲ အစ်ကို .
ကြားနေတာ မဟုတ်ဘူး .နိုင်ငံ သား တစ်ယောက် အနေနဲ့အမုန်းတရား မရှိ တာပါ . ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ့မှ မမုန်းမှတိုင်းပြည်တိုးတက်မှာ .အခု သတင်း တစ်ခု တက်တယ် . ဘယ်သူဖွလည်းတော့ မသိဘူးအဲ့လို ဖွတဲ့ လူတိုင်း လိုက်ရှင်းရင် သေတဲ့ အထိ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး .
ယုန်လေး သိန်း ၇၀၀၀ ရတယ် .ဦးဝင်းမြိုင် . အန်တီ မို့ . ကိုသားညီ . ကိုညီနန္ဒ ၂၀၀ စီရတယ်တိုပြီးCopy လုပ်ပြီး လိုက်မန့် တယ် . သူပြောတဲ့ ပိုက်ဆံထုပ်ပေးတဲ့ဗိုလ်ချူပ်သားဆိုလား . ဘာလား လူကို တွေ့လည်း မတွေ့ဖူးဘူး . သိလည်း မသိဘူး. နာမည်လည်း မကြားဖူးဘူး .အဲ့ အတွက် စာနယ်ဇင်းပွဲ လုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံလဲ မရှိဘူး .နိုင်ငံရေး နဲ့ ပက်သက်တာဘာမှ မလုပ်တော့ပါဘူးMedia မွာျေပာပြီးပြီ ဘယ္မဲဆြယ္ပြဲ ဘယ္ပါတီမွ မဆိုဘူးနိုင်ငံရေးကို ကြောက်သွားပါပြီ လည်းပြောပြီးပြီအဲ့ဒါ လည်း မပြီးကျသေးဘူး .
အခု ဒီ ညနေ ဖြစ်ဖြစ် . ညဖြစ် ဖြစ် . Ready ပဲ .ကိုယ် ဘာမှ မဟုတ်တာ မလုပ်ထားတာ လိပ်ပြာလုံတယ် .အခုထဲ က အားနေပါပြီ . ကိုအုန်းဝင်း . အစည်းရုံးဥက္ကဌ ကြီးနှင့်ဒါရိုက်တာထဲ မှ မေးချင်တဲ့ လူတစ်ယာက် .တေးရေး ဆရာထဲ မှ သံသယ ရှိသူ မေးချင်တဲ့ လူများ ၂ ယောက်လောက်ပေါ့ .လာမေးပါ . ငြိမ်းငြိမ်းချမိးချမ်း ဖြေရှင်းပါမယ် .အားလုံး အတွက် ကျွန်တော်မှ တာဝန်ရှိပါတယ် .ဒီတစ်ခါ ပြီးရင်တော့ ဘာမှ ထပ်မရှင်းတော့ ပါ .ရုပ်ရှင် အစည်းရုံး Meeting ခန်းလေး အခမဲ့ ပေးသုံးပါ ခင်များ .ကြိူက်တဲ့ Media များ လာပါ .ယှဉ်ဆိုင်ဖို့ အသင့်သီချ င်းထဲတွင် ပါဝင်သူများ တစ်ယောက်နှင့်မှဘာမွ မသက္ဆိုင္ပါ source yone lay Credit;အလင်းမြေ
အားလုံး အတှကျ ကြှနျတျော မှ တာဝနျ ရှိပါတယျ .ဒီတဈခါ ပွီးရငျတော့ ဘာမှ ထပျမရှငျးတော့ ပါ
အဈကို့ ကို တောကျလြောကျ အဈကို အရငျးလို ဆကျဆံတယျ .အကုနျလုံး သိခငျြတာတှေ ပွောပွတယျ. ကြှနျတေျာ့ ဦးနောကျ ခကျြခငျြး တဈရကျနီးပါး အလုပျမလုပျေ တာ့ဘူးတို ငျပငျတယျ .တောငျးပနျသငျ့ တယျပွောတယျ . တောငျးပနျတယျ . ဖွုတျခသြငျ့တယျ ပွောတယျ ဖွုတျခတြယျ .ကြှနျတျော တိုကျေ ပျါက ခုနျခငျြတာတို့ .ရှကေ့ဓား နဲ့ ကိုယျ့ဗိုကျကို ထိုးခငျြတဲ့ အထိဖွဈတယျ .သခေငျြတဲ့ စိတျတှေ အထိ ဖွဈတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ရငျးနီး ဖူးတဲ့ တျောတျောမြားမြား မထညျ့တှကျပေးကဖြူး .
တောကျလြောကျ Pressure ပေး ပွီး Status တှတေငျတယျ .လေးစားလို့ အဈကို Status တှအေထငျအမွငျ တဈဇောငျးတှကွေီးပဲတငျလာတယျ .ကြှနျတျော တောငျးပနျတယျ .ဖွုတျခတြယျ .အခုလညျး တဈနှဈပိတျ အပွဈပေးတယျ .အဈကို မပွီးသေးဘူး .ဘယျလောကျအထိ စှတျစှဲ မကောငျးမွငျဦးမှာလဲ အဈကို .
ကွားနတော မဟုတျဘူး .နိုငျငံ သား တဈယောကျ အနနေဲ့အမုနျးတရား မရှိ တာပါ . ဘယျသူ့ ဘယျသူ့မှ မမုနျးမှတိုငျးပွညျတိုးတကျမှာ .အခု သတငျး တဈခု တကျတယျ . ဘယျသူဖှလညျးတော့ မသိဘူးအဲ့လို ဖှတဲ့ လူတိုငျး လိုကျရှငျးရငျ သတေဲ့ အထိ ပွီးမှာမဟုတျဘူး .
ယုနျလေး သိနျး ၇၀၀၀ ရတယျ .ဦးဝငျးမွိုငျ . အနျတီ မို့ . ကိုသားညီ . ကိုညီနန်ဒ ၂၀၀ စီရတယျတိုပွီးCopy လုပျပွီး လိုကျမနျ့ တယျ . သူပွောတဲ့ ပိုကျဆံထုပျပေးတဲ့ဗိုလျခြူပျသားဆိုလား . ဘာလား လူကို တှလေ့ညျး မတှဖေူ့းဘူး . သိလညျး မသိဘူး. နာမညျလညျး မကွားဖူးဘူး .အဲ့ အတှကျ စာနယျဇငျးပှဲ လုပျဖို့ ပိုကျဆံလဲ မရှိဘူး .နိုငျငံရေး နဲ့ ပကျသကျတာဘာမှ မလုပျတော့ပါဘူးMedia မှာ ပြောပွီးပွီ ဘယ်မဲဆွယ်ပွဲ ဘယ်ပါတီမှ မဆိုဘူးနိုငျငံရေးကို ကွောကျသှားပါပွီ လညျးပွောပွီးပွီအဲ့ဒါ လညျး မပွီးကသြေးဘူး .
အခု ဒီ ညနေ ဖွဈဖွဈ . ညဖွဈ ဖွဈ . Ready ပဲ .ကိုယျ ဘာမှ မဟုတျတာ မလုပျထားတာ လိပျပွာလုံတယျ .အခုထဲ က အားနပေါပွီ . ကိုအုနျးဝငျး . အစညျးရုံးဥက်ကဌ ကွီးနှငျ့ဒါရိုကျတာထဲ မှ မေးခငျြတဲ့ လူတဈယာကျ .တေးရေး ဆရာထဲ မှ သံသယ ရှိသူ မေးခငျြတဲ့ လူမြား ၂ ယောကျလောကျပေါ့ .လာမေးပါ . ငွိမျးငွိမျးခမြိးခမျြး ဖွရှေငျးပါမယျ .အားလုံး အတှကျ ကြှနျတျောမှ တာဝနျရှိပါတယျ .ဒီတဈခါ ပွီးရငျတော့ ဘာမှ ထပျမရှငျးတော့ ပါ .ရုပျရှငျ အစညျးရုံး Meeting ခနျးလေး အခမဲ့ ပေးသုံးပါ ခငျမြား .ကွိူကျတဲ့ Media မြား လာပါ .ယှဉျဆိုငျဖို့ အသငျ့သီခြ ငျးထဲတှငျ ပါဝငျသူမြား တဈယောကျနှငျ့မှဘာမှ မသက်ဆိုင်ပါ source yone lay Credit;အလငျးမွေ
အမျိုး သမီးလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားဟောင်း စန်းစန်းမော် အကြော်ရောင်းချနေခြင်း နောက်ကွယ်က အမှန်တရားများ